Nahoana ny ankizy no manaikitra ny fantsika?
Izany dia miteraka fahazaran-dratsy ny ankizy ao amin'ny taom-pianarana voalohany - manilika ny fantsika. Araka ny antontan'isa, dia mety ho voan'ny aretina kokoa ny mpianatra 7 ka hatramin'ny 10 taona. Na dia mahazatra io fahazarana io eo anivon'ireo ankizy any am-pianarana sy ny olon-dehibe aza.
Inona no mety ho vokatr'izany raha misy ankizy mitongilana eo amin'ny sandriny?
Voalohany, avy eo amin'ny rantsantanana no maneho ny ratra sy ny ratra, izay manasitrana sy misokatra ho an'ny mikraoba, mety miteraka fanindroany mihitsy aza;
Faharoa, miaraka amin'ny tanana maloto sy ny fantsika, ny vovoka, ny viriosy azo atahorana dia afaka miditra ao am-bavan'ilay zaza, mety hiteraka ihany koa ny endriky ny kankana;
Fahatelo, voantso nopotehina - ratsy sy tsy mety.
Andeha hojerentsika ny antony mahatonga ny ankizy hanaikitra ny fantsika amin'ny tanany, ary hevero ny antony lehibe indrindra amin'izany:
Ny tena mahazatra dia ny ara-tsaina :
Ny ankizy dia afaka manaikitra ny tongony amin'ny tsy fandriampahalemana amin'ny fahaizany. Izany dia manazava ny antony mahatonga ny ankamaroan'ny ankizy iharan'ny fahazarana, manomboka amin'ny taom-pianarana, rehefa manomboka ny fanombantombanana dia mila mitandrina amin'ny lohahevitra ianao, mameno ny zavatra andrasan'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny, sns.
Ny ahiahy, na ny herisetra sy ny fahatezerana aza dia mety ho antony hibitsibitsihina. Ny fihetseham-po toy izany dia mety hitranga raha manana toe-pihetseham-po ny fianakaviana: matetika ny ray aman-dreny mianiana, mangataka ny ankizy, matetika mampiasa sazy ara-batana ho an'ny tanjona fanabeazana, sns. raha misy olana amin'ny fifampiresahana amin'ny namana; raha toa ka nihanihany ny fifanoheran-tsofina anatiny ny ankizy, sns.
Physiologique : raha matetika ny mpangalatra, mandany, dia lasa tsy mahazo aina izy ireo ary tena maniry ny hanaikitra azy ireo. Ny ankizy dia manao izany.
Mitranga izany fa tiany fotsiny ny fantsika ny hombo .
Noho izany, mba hanapahana ny fomba hanalana izany fahazarana izany, tokony ho takatrao aloha ny antony mahatonga ny ankizy hiondrika eo amin'ny tanany. Aorian'izany, afaka manapa-kevitra amin'ny hetsika hafa ianao.
Ary ahoana raha toa ilay zazakely mamomamo eo amin'ny rantsan-tongotra?
Tokony lazaina fa tsy ilaina ny mitsikera sy manome fanazavana foana, fa tsy hanampy. Mila manana faharetana ianao.
Raha antony ara-psikolojika no mahatonga ny fahazaran-dratsy, dia tokony hatao ny asa lava indrindra, satria ilaina ny mahatakatra hoe inona no fanontaniana manelingelina ny zaza, inona no mahatonga ny fihetseham-po sy ny fomba hanitsiana izany. Indraindray aza mila manatona mpitsabo iray aho.
Raha olana ara-batana izany, dia ilaina ny manolo ny fahazarana manodina ny fantsika amin'ny hafa - mikarakara azy ireo. Avelao ny ankizy hanisy tahirin-tsilo foana aminy. Ny zazavavy dia afaka manolotra ny fantsika ary hiaro azy ireo.
Raha toa ka tsy mahatsikaritra akory ny fomba fisintonan'ny rantsantanana indray ny rantsan-tànana, dia afaka manangana mari-pamantarana miavaka izay ho fantatra aminao ihany. Ohatra, hianjera ianao raha vao mahamarika ny fihetsika mety, na manasitrana ny orona, na mamely ny zanakao any aoriana.
Na ahoana na ahoana, dia zava-dehibe ny manintona ny sain'ny ankizy amin'ny zava-misy fa manimba ny fahasalamana io fahazarana io. Ampisehoy ireo fantsika hikoloana.
Sanorin ho an'ny ankizy
Enuresis amin'ny ankizy - fitsaboana
Ny moka amin'ny vatan'ny zaza
Appendicitis - soritr'aretina eo amin'ny ankizy, ny antony sy ny karazan'asa
Ny zaza dia manana alahelo ao amin'ny foitra - inona no tokony ataoko?
Nahoana ny ankizy no mandeha amin'ny kibony?
Fenistil ho an'ny zaza vao teraka
Fanafody ho an'ny dysplasia ny tendan'alika
Echinacea ho an'ny ankizy - fiarovana mafy ny fiarovana
Mihamaro ny ESR amin'ny zaza
Bronchiolitis amin'ny ankizy
Fanafody ho an'ny ankizy rehefa kohaka
Hémorrhoids amin'ny ankizy
Animaldi labozia ho an'ny ankizy
Ny nify - inona no tokony hatao ao an-trano?
Ahoana no hahatonga anao ho hany tokana ho an'ny lehilahy?
Tsy misy diabeta mellitus - soritr'aretina
Helium-nail amin'ny tanana - fitsaboana
Shurpa avy amin'ny duck - sakafo mahavariana ho an'ny fianakaviana iray manontolo
Mankao amin'ny sarimihetsika "Fast and Furious 8": nizara ny hevitra
Trano ortopedika ho an'ny mpianatra
Volombava amin'ny vato amin'ny tanana manokana
Aquarium - aiza no hanombohana?
Fomba Ethno - ireo tsiambaratelon'ny fanorenana tsipika lamaody amin'ny fomba ara-poko
Stones for Women-Libra
Ahoana no hamaritra ny vohoka raha tsy misy fitsapana ao an-trano?
Salade "Venice" - resipe
Top 10 tsiambaratelo ny hatsarana, noho izany dia handao an'i Botox ianao